Fepetra amin’ny fifidianana :: Mametra-pialana ireo tompon’andraiki- panjakana voaray ho kandidà • AoRaha
Fepetra amin’ny fifidianana Mametra-pialana ireo tompon’andraiki- panjakana voaray ho kandidà
Fampifandanjan-kery. Tompon’andraiki-panjakana maromaro no tsy maintsy hametra-pialana raha tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo kandidà ara-dalàna, eken’ny Rafitra misahana ny fanaraha-maso ny firotsahan-kofidiana isaky ny distrika (Ovec) sy ho anisan’ireo kandidà ôfisialy havoakan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) ny anarany.
“Ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana laharana 2014-020 no mametraka an’io fepetra io”, araka ny fanazavana nomen’Andriamanantsoa Philibert Hervé, filoha lefitry ny Ceni, omaly. Eo ihany koa ny fisorohana amin’ny mety hampiasain’ireo sokajin’olona ireo ny fahefana eo am-pelatanany mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana.
“Teren’ny lalàna hiala amin’ny andraikitra sahaniny ny ben’ny tanàna am-perinasa sy ny minisitra hilatsaka hofidiana. Mila mametra-pialana izy ireo, vantany vao eken’ny Ovec sy havoakan’ny Ceni amin’ny fomba ôfisialy fa anisan’ireo kandidà handray anjara amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra ny anarany”, hoy Andriamanantsoa Philibert Hervé, filoha lefitry ny Ceni. Hafa kosa ny fepetra ho an’ireo mpanolotsainan’ny tanàna am-perinasa na solombavambahoaka mbola hilatsaka hofidiana indray.
“Tsy voatery hiala amin’ny toerany izy ireo. Ho an’ny mpanolotsaina manokana dia tsy mahazo manatrika fivoriana intsony izy mandra-pahatongan’ny fotoana hamoahana ny didim-pitsarana hanambarana ny voka-pifidianana ôfisialy. Afaka mijanona amin’ny maha mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena azy kosa ny solombavambahoaka mandritra ny fifidianana. Mila misafidy andraikitra iray anefa izy, aorian’ny famoahana ny voka-pifidianana ôfisialy raha toa ka lany. Manana fe-potoana telopolo andro aorian’ny fahalaniany izy mba hanaovana ny safidiny”, hoy hatrany ny filoha lefitry ny Ceni.
Fantatra amin’izao fotoana izao fa Ovec miisa telo avy any amin’ny distrikan’i Mahajanga II, Benenitra, ary Beroroha no tsy mbola nahatonga ny lisitra eny amin’ny Ceni foibe. Amin’ny 24 septambra kosa na amin’ny 26 septambra farafahatarany no hamoaka ny lisitra ôfisialy ny Ceni, araka ny tenin’ny filoha lefiny.
Fifidianana amin’ny ampahany
Kaominina roa any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka (Amparihitsokatra sy Antsangasanga) no tsy manana kandidà ben’ny tanàna mihitsy. Roapolo amby zato andro aorian’ny famoahana ny voka-pifidianana ôfisialy no hanaovana ny fifidianana amin’ny ampahany any amin’ireo kaominina ireo, araka ny efa nambaran’ny Ceni. Amin’ny 14 janoary 2020 no hivoaka ny vokatra ôfisialy, raha ny tetiandro novinavinan’ny Ceni no jerena.
Hisokatra amin’ny 1 desambra 2019 ka hatramin’ny 15 mey 2020 anefa ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy . Tsy hisy fifidianana azo hatao mihitsy raha tsy vita tanteraka io asa io. Aorian’ny 15 mey 2020, araka izany, vao hotanterahina ny fifidianana amin’ny ampahany, ho an’ireo kaominina tsy naharaisana firotsahan-kofidiana ho ben’ny tanàna.
Baolina kitra :: Sady ho tale teknika nasionaly no mpanazatra ny Barea i Nicolas Dupuis